Nduropic Stack kacha mma: Ihe niile I Kwesịrị Knowmara [Afọ Afọ 5]
Knowmaara na ị nwere ike mara nka n’etinyeghị aka n’ọkụ n’abụghị ọkụ n’abalị? Ọ bụrụ na ntụ ntụ ga - enyere gị aka imeziwanye ncheta gị ma ọ bụ mee ka ịmụrụ anya na-amụ anya, ị ga-ewere ya?
taa, ọgwụ ọjọọ, makwaara dị ka nootropics, na-aghọrọ ọtụtụ ndị ihe ọma. Ihe kpatara nke a bụ n'ihi na amaara ha ka ọdịmma mmadụ kwa ụbọchị. Uru nootropic sitere na nlebara anya ogologo oge, itinyekwu uche, itinyekwu uche yana ụbụrụ na-amụ anya.
Will ga - achọpụta na enwere ụmụ akwụkwọ na - adịchaghị mma icheta ma ga - achọ ịkọ nyocha ha n'enweghị nnukwu mgba. Ọzọkwa, enwere ndị nwere ọkwá dị elu nke nwere nnukwu okwute ga-achọ ịnọgide na-etinye uche ogologo ụbọchị niile.
N'elu nke ahụ, ụfọdụ mmadụ na-eji nootropics na smart ọgwụ ntụ ntụ iji jikwaa nsogbu ọrụ moto dịka Alzheimer, ọrịa Hunnington, Parkinson, na ADHD. Ọ bụ maka ebumnuche ndị a ka ị nwere ike ịtụle iji nootropics nọrọ n'ihu ndị ọzọ.
Na mpempe a, anyị emechiela 15 kachasị elu ntụpọ nootropic na ihe mere ha ji pụọ iche.
Ghọta ụdị nootropics dị iche iche
N'oge na-adịbeghị anya gara aga, ụlọ ọrụ ọgwụ smart etolitela, na-enwe ọtụtụ nootropics karịa ka ọ dị ugbu a. Nke a bụ edemede isii nke enwere ike itinye nootropics n'ime;
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime nkwalite ọgụgụ isi agwuru ebe niile nke a na-ere n'elu tebulu. Ihe dị mma banyere ha bụ eziokwu bụ na ha na-emeziwanye ọrụ ọgụgụ isi mmadụ na-enweghị ihe ọ bụla dịka mkpali ma ọ bụ ọgwụ ogwugwo. Agbanyeghi na ndi sayensi akatabeghị usoro ha si arụ ọrụ ọfụma, ekwuru na ha na-abawanye usoro ọbara ma na-a andụ oxygen bụ akụkụ ụfọdụ nke ụbụrụ.
Ọ dabara nke ọma, ha dị mfe ịnweta dịka ị nwere ike ịchọta ha n'ịntanetị n'ịntanetị. Agbanyeghị, ọ bụ ole na ole enwere nsogbu nke ọghọm ndị a ka akọpụtala.
Ọtụtụ mgbe, ọtụtụ ọgwụ na klaasị a na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ejiri ha ogologo oge. Nke ahụ pụtara na iji rite uru kachasị elu, ị ga-eji ya ruo ọtụtụ izu.
Nootropic ọ bụla e lere anya dị ka ahịhịa, ahịhịa, ma ọ bụ nke sitere n'okike nwere klas a. Ọtụtụ mgbe, ha na-abụkarị ndị na-akụ ihe ọkụkụ na-enyekwa uru sitere n'okike. A na-ahọrọ ọgwụ ndị a ọgwụ ugboro ugboro n'ihi na ha dị mma iji ha n'ihi na ha enweghị ogige ma ọ bụ kemịkal.
Otu n'ime ihe ndị mere adịghị eme nke ọma bụ na ha anaghị etinye ntụpọ ma e jiri ya tụnyere nootropics sịntetik. N'ihi ya, mmadụ nwere ike ị veryụ ọgwụ dị elu iji nweta otu mmetụta nke ndị sịntetik.
Nweta vitamin B
Dị ka aha ahụ na-egosi, ihe ndị a na-ahụ na vitamin B bụ nootropics sitere na vitamin B iji wepụta uru kachasị mma. Ha na-emetụta ọkwa glutamate, choline, na dopamine na ụbụrụ, nke a na - eme ka ha baa uru na ọgwụgwọ nke nsogbu nchịkwa degenerative dịka ADHD.
Na mmechi, a na-eji usoro ndị a eme ihe na ọgwụgwọ nke ike anụ ahụ na nke uche yana mmụba na njigide ncheta.
Ikekwe ị mụtala banyere peptides n'oge gara aga. Ha bụ ndu enwere na ndu nke amino asịd na nke bụ njikọta ọgwụ kemikal covalent. Agbanyeghị na ha anaghị enweta ngwa ngwa, Noopept dị na ntanetị na ụlọ ahịa. Peptides siri ike ma gosipụtala iji kwalite mkpali, ncheta, ike iche echiche, ike mmụta, na ịmụrụ anya.
A choputara choline na aru, mana anyi nwere ike taa ahuhu nihi ya. N'ihi ya, nke a na-eduga n'ibelata ikike ọgụgụ isi ya mere na mbelata ahụike ụbụrụ niile. Inweta choline nootropics na-enyere aka ịbawanye mmepụta ụbụrụ nke acetylcholine neurotransmitters.
Enwere ike ị supụ mmechi Choline n'onwe ha ma ọ bụ sorokwa na racetams. Mgbe ejikọtara ọnụ, ha na-eduga n'ịbawanye ikike ncheta, ikike ịmụ ihe, na imeziwanye ọnọdụ niile.
Ndi amaka bu otutu ndi nootropics kachasi ike nke eweputara n’oge na-adighi anya. Ha na-arụ ọrụ site na mkpali nke ndị na-anabata glutamate na ụbụrụ. N'ihi ya, ha na-eduga n'inwe ọtụtụ afọ glutamate, nke na-eme ka mmụta na ncheta dịkwuo mma.
Kacha mma ntụ ntụ nootropic: Nootropic kachasị mma maka nkwalite ebe nchekwa: Kacha mma nootropic maka arụmọrụ egwuregwu:
Purity≥98% Flmodafinil ntụ ntụ
Pure≥98% Pramiracetam ntụ
Pure≥98% Carphedon ntụ ntụ
Ihe mere anyị ji kpoo ya:
Ọ dị oke arụ ọrụ ọbụlagodi na usoro ọgwụgwọ dị ala.
Nsonaazụ ole na ole.
Ga-ahụ mmetụta ya n'ime nkeji iri atọ mgbe iwechara ya.
Na-eduga n'inwe ncheta dị elu site n'inyere ncheta ogologo oge
Ọ naghị eme ka mmadụ taa ahụhụ n'ọtụtụ mmetụta ọ na-akpata. ntụgharị, mmetụta euphoric
Ọ na - adaba n'ime 1-2 awa ị were ya
Na-enye mmetụta mkpali dị egwu
A na-etinye ya ngwa ngwa n'ime ahụ
A na-eru ọkwa kachasị elu n'ime otu elekere n'ọrụ.
Ndị a bụ Top 15 Nootropics Smart Drug powder:
Kacha mma ntụ ntụ nootropic-Flmodafinil
Nootropic kachasị mma maka nkwalite ebe nchekwa-Pramiracetam
Nootropic kachasị mma maka arụmọrụ egwuregwu-Carphedon ntụ ntụ
Nootropic kachasị mma maka ịmụrụ anya- Adrafinil ntụ
Onye nkwalite ọgụgụ isi kachasị mma- Fladrafinil (CRL-40,941) ntụ
Nlele anya kachasị mma- Hydrafinil (9-Fluorenol) ntụ
Ngwa nootropic-kacha arụ ngwa ngwa- Noopept (GVS-111) ntụ
Nootropic kachasị mma maka neuroprotection-Nefiracetam Powder
Onye nkwalite uche kachasị mma- Aniracetam ntụ
Nootropic kachasị mma n'ịgwọ ọrịa Alzheimer- J-147 ntụ
Kacha mma mgbochi nootropic-Magnesium L-Threonate ntụ
Nootropic kachasị mma n'ịkwalite ọrụ gbasara obi- Nicotinamide Riboside Chloride ntụ ntụ
Nootropic kachasị mma maka ọgwụgwọ ọrịa shuga-Galantamine Hydrobromide ntụ ntụ
Nootropic kachasị mma n'ịlụ ọgụ cancer cancer- Compound 7P ntụ ntụ
Onye na - eme ihe kachasị mma - N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester ntụ ntụ
Tụlee ihe kachasị mma 15 smart nootropic powder in 2019
AHA ỊDỤ EGO NA-EGO -atụ aro DOSAGE ỌKARA NDỤ
Flmodafinil ntụ ntụ 5 Ole na ole 100-200mg kwa ụbọchị 12-15 awa
Pramiracetam ntụ ntụ 5 Ole na ole 600-1200mg kwa ụbọchị 5-6 awa
Carphedon ntụ ntụ 5 Ole na ole 200-750mg kwa ụbọchị 3-5 awa
Adrafinil ntụ ntụ 4.5 Ole na ole 600-900mg kwa ụbọchị 12-15 awa
Fladrafinil ntụ ntụ 5 Obere mmetụta ọ bụla 100-200mg kwa ụbọchị 6-7 awa
Hydrafinil ntụ ntụ 4.5 Ole na ole 50-150mg kwa ụbọchị 6-8 awa
Noopept popwder 5 Ole na ole 30-60mg kwa ụbọchị 3-6 awa
Nefiracetam ntụ ntụ 4.5 Ole na ole 600-900mg kwa 3-5 awa
Aniracetam ntụ ntụ 5 Ole na ole 1500mg 1-2.5 awa
J-147 ntụ ntụ 5 ọtụtụ 20-30mg 1.5-2.5 awa
Magnesium L-Threonate ntụ ntụ 5 Ole na ole 1500-2000mg 44 awa
Nicotinamide Riboside Chloride ntụ ntụ 4.5 Ole na ole 1000-2000mg 5.3 awa
Galantamine Hydrobromide ntụ ntụ 4 ọtụtụ 4-8mg 7 awa
7P ntụ ntụ 5 Ole na ole 5000mg 1-2 awa
N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester ntụ ntụ 4.5 Ole na ole 5000mg 5.6 awa
Kacha mma ntụ ntụ nootropic
1. Ọcha≥98% Flmodafinil (CRL-40,940) ntụ ntụ 90280-13-0
Maka onye na-achọ nootropic dị mma n’emeghị oke ya n’ime sistem, mgbe ahụ Flmodafinil ntụ ntụ bụ ezigbo azụmahịa. Ọ bụ ihe ọ toụ iji ebe ọ bụ na achọrọ flmodafinil chọrọ 100-200mg ugboro abụọ kwa ụbọchị. Site na nyocha Flmodafinil nke ndị ọrụ nyere, o doro anya na nootropic a ga - eme ka ị nwee mmetụta ma chee dịka onye isi site na ị were obere ego.
Ọ gosipụtala na ọ na-eme ka mmadụ nwekwuo ikike ọgụgụ isi na ịmịpụta ihe site na ịba ụba nke histamine, orexin, glutamate, na ọkwa norepinephrine. Ndị ọzọ abụghị na ọ na-arụkwa ọrụ site na igbochi mmebi nke dopamine n'ahụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ otu n'ime ihe ọhụụ na ahịa, ọ bụ nootropics ntụ ntụ kachasị mma n'ihi uru ọ na-eweta na tebụl. Otu n'ime ha bụ mmụba nke mmụta mmadụ na ikike icheta.
Nke abuo, ọ na - enyere aka n'ịgwọ obere ịda mbà n'obi site na iweghachi ọnọdụ mmadụ mgbe ọ bụla. Ọ na - enyere aka na njikwa ADHD na ọnọdụ ndị ọzọ metụtara anya. Ọzọkwa, a maara Flmodafinil ka ọ na-amụba ịmụrụ anya, na-eme ka mkpali dịkwuo mma, ma na-elekwasị anya, na ọbụna karịa ka mmadụ si arụ ọrụ nke ọma.
Mgbe ị na-atụnyere Flmodafinil vs. modafinil, ọtụtụ atụmatụ na-abata ọnụ, dịka ọmụmaatụ, mmetụta Flmodafinil dị obere ma e jiri ya tụnyere nke modafinil. N’agbanyeghi na ha di otu ihe, usoro ha ha di iche di iche, nke a na - eme ka Flmodafinil nwekwuo ihe ndi ozo.
Banyere iwu nke Flmodafinil, ọ dabere na mba i si bịa. Dịka ọmụmaatụ, maka ịzụtara Flmodafinil ntụ na Canada, ịchọghị ọgwụ, ebe ịchọrọ ka ọ bụrụ maka ịzụta Flmodafinil na Europe.
Ọ bụrụ na ị na-eche ebe ị ga-azụta Flmodafinil ntụ ntụ, mgbe ahụ ịkwesighi ile anya. Nwere ike ịhọrọ ịzụta Flmodafinil na ntanetị dịka nhọrọ kachasị adaba ma dị ọnụ ala. Anyị bụ isi ọgwụ nootropic powders ebe ị nwere ike ịzụta CRL-40,940 ntụ ntụ Flmodafinil.
Ọ na-arụ ọrụ site n'ịgbanwe usoro akwara, histxin, dopamine, glutamate, na norepinephrine.
Usoro ọgwụgwọ akwadoro bụ 100-200mg kwa ụbọchị.
Anwalewo ya na ụmụ anụmanụ.
Nootropic kachasị mma maka nkwalite ebe nchekwa
2 Pure≥98% Pramiracetam ntụ ntụ 68497-62-1
Ma ị bụ onye mmụta nke na-achọ ime ule ikpeazụ ha ma ọ bụ agadi nke chọrọ ichebe isi awọ ha, mgbe ahụ pramiracetam bụ maka gị. Ọ bụ nootropic kachasị mma ma a bịa n'ịnọgide nwee ebe nchekwa siri ike. Pramiracetam bụ nke ezinụlọ racetam mana ọ dị ike karịa ugboro iri atọ na racetams.
Pramiracetam ntụ ntụ na-arụ ọrụ site na ịba ụba ọnụọgụ choline na mmepụta nitric oxide na ụbụrụ. Isi uru Pramiracetam gụnyere; mmelite dị mma na mgbake site na mmerụ ụbụrụ ọ bụla. Ọ na - enye aka na ntụgharị na mgbochi nke amnesia.
Ihe ngwugwu Pramiracetam nwere otutu ihe choline iji gbochie onodu acetylcholine di na ụbụrụ ma meziwanye ihe omuma. Enwere ike ido ya na Adrafinil, Armodafinil na Modafinil. Tụnyere Pramiracetam vs. Phenylpiracetam, o doro anya na Pramiracetam anaghị akpata mmetụta dịka mgbakasị, ọgbụgbọ, na isi ọwụwa dịka nke abụọ.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta Pramiracetam na mkpọsa ma ọ bụ nnukwu ntụ ntụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịtụkwasị anyị obi oge niile.
Ọ nwere mmalite ngwa ngwa.
Na-enye mkpali nke mmụọ na-enweghị eduga na hyperstimulation.
Oge ọgwụgwọ ọ dị mkpụmkpụ.
Ọ bụ abụba-soluble ya mere kacha were nri yana nri.
Nootropic kachasị mma maka arụmọrụ egwuregwu
3 Pure≥98% Carphedon (Phenylpiracetam) ntụ ntụ 77472-70-9
Carphedon bụ ihe nrụpụta piracetam nke naanị ọdịiche anụ ahụ na piracetam bụ phenyl otu dị na ya. N'ihi otu a, ọgwụ phenylpiracetam ntụ ntụ dị mkpa iji nye otu mmetụta dịka Piracetam dị ala ma ewere ya na 20-60 dị ike karịa Piracetam.
Ọtụtụ n'ime nyocha Phenylpiracetam na-ekwu okwu banyere nrụpụta ọrụ ya n'ịkwalite arụmọrụ egwuregwu n'ihi mmetụta na-akpali akpali ọ na-enye. Ọ na - enyere ndị mmadụ aka ịjụ oyi. Uru ndị ọzọ gụnyere njikwa nke epilepsy, ọrịa strok, nsogbu ncheta, na ike ọgwụgwụ.
Ekwesighi iwe Phenylpiracetam n'oge ụra n'ihi na ọ nwere ike ibute nsogbu ụra. Ọzọkwa, ị ga-ewere ya ugboro abụọ ma ọ bụ anọ kwa izu ma ọ bụ na usoro iji gbochie anụ ahụ imepụta ndidi maka mmetụta na-akpali akpali.
Kacha mma nootropic maka ịmụrụ anya
4 Pure≥98% Adrafinil ntụ ntụ 63547-13-7
Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịbawanye ụra na ibelata ụra, mgbe ahụ, ị ​​ga-atụle ị takingụ ntụ ntụ adrafinil. Imirikiti nke nyocha Adrafinil na-egosi na ọ bụ ihe enyemaka iji nyere mmadụ aka ịmụrụ anya maka ogologo oge. Na usoro nke Adrafinil vs. Ndụ ọkara Modafinil, nke ikpeazụ nwere ogologo oge. Adrafinil na-agbanye n'ime modafinil mgbe ọ na-agbakwunye na ọkara ndụ ya n'ihi mmetụta na-adịte aka.
Mmetụta ndị ọzọ Adrafinil gụnyere itinye uche na-aba ụba; ime ka ikike ịmụ ihe na ịkwalite ebe nchekwa dị. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịkpata nsonaazụ ole na ole, a na-ewere ya dị ka ihe na-akpali nchebe ebe ọ bụ na ọ naghị ebute ọtụtụ mmetụta na-adịghị mma metụtara ndị na-akpali akpali.
Ọ kachasị mma iji mmiri ma ọ bụ ihe ọ cụ cụ citrus mee n'ihi ụtọ ilu Adrafinil dị ụtọ. Ebe ọ bụ na iwu kwadoro n'ọtụtụ mba, ị nwere ike ịzụta adrafinil ntụ ntụ n'ịntanetị na-enweghị mkpa ndenye ọgwụ.
Usoro ọgwụgwọ akwadoro bụ ihe dị ka 600-900mg.
The Adrafinil utịpikpeazụ maka awa 12-15.
Ekwesighi iwe ya kwa ụbọchị ma ọ bụ ogologo oge ka ọ na-ewulite ndidi.
Onye kachasị nweta ọgụgụ isi
5 Pure≥98% Fladrafinil (CRL-40,941) ntụ ntụ 90212-80-9
Na-achọ ihe ga - enyere gị aka ịdị elu karịa ohere ị gabigara? Fladrafinil uzuzu bu ogwu ogwu kachasi nma n’inye uche nke uche na ikike nke mmadu. Ọ na-arụ ọrụ site na igbochi nkwụsị nke dopamine n'ihi ya, usoro nke mmeghachi omume mmetụta uche, mmụta, na nlebara anya.
Fladrafinil yiri modafinil uzuzu na usoro nke ihe ha mejuputara na ihe di iche na ihe di iche bu uzo ozo nke fluoride. Mgbakwunye na-eme ka Fladrafinil banye n'ime ahụ ngwa ngwa.
Mmetụta Fladrafinil dị ole na ole, mana ogo ha nwere ike ịbawanye ụba site n'iji ya eme ihe mgbe niile. Luckily, ọ bụ ngwa ngwa dị, na ị nwere ike ịzụta Fladrafinil online ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
The Usoro ọgwụgwọ Fladrafinilkwesịrị ịdị ihe dị ka 100-200 mg n'otu ụbọchị.
The Nsonaazụ Fladrafiniladabaghị.
O nwere ike okpukpu atọ karịa nke Adrafinil na Modafinil.
Onye na - eme ka a na - ege ntị nke ọma
6 Pure≥98% Hydrafinil (9-Fluorenol) ntụ ntụ 1689-64-1
Hydrafinil uzuzu, nke a makwaara dị ka Fluorenol bụ onye na-emechi ihe nchịkwa nke dopamine nke isi mmetụta ya bụ ịbawanye ntị. Ihe ndị ọzọ Hydrafinil bara uru gụnyere ike uche bara ụba, mgbatị ka mma, ma belata ike ọgwụgwụ.
Usoro Hydrafinil nke ihe na-agụnye mmụba nke histamine, norepinephrine, na glutamate iji mee ka ọnọdụ mmadụ dịkwuo mma. Mgbe ị na-atụle Hydrafinil vs. modafinil bioavailability, Hydrafinil nootropic egosila na ọ nwere mkpụmkpụ.
A naghị achịkwa ahịa ya ka ị zụta Hydrafinil raw (9-Fluorenol) oge ọ bụla ịchọrọ.
Ọ dị ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere nootropics ndị ọzọ.
Hydrafinil abụghị obere ihe na-akpali akpali ya mere mmeghachi omume ọjọọ ole na ole.
The Mmetụta Hydrafinilna-eche na aghụghọ.
Kachasị ngwa ngwa nootropic
7 Pure≥98% Noopept (GVS-111) ntụ ntụ 157115-85-0
Noopept ntụ ntụ bụ sịntetik nootropic nke a na-ewere dị ka mgbakwunye. Ọ bụ ọgwụ na-eme ngwa ngwa kachasị ka ọ dị ka ị nwere ike ịnwe mmetụta ya n'ime nkeji. Ọ bụrụ n'ị na-eche etu Noopept si arụ ọrụ, yabụ m ga-agwa gị otu esi eme ya. Usoro ọrụ ya gụnyere mmụba nke kemịkal ụbụrụ ụbụrụ abụọ dị mkpa; NGF na BDNF.
Nkọwapụta Noopept gụnyere mmelite na ncheta mmadụ, nghọta, ọsọ ọsọ nke echiche, ilekwasị anya, ịdị ike, na ịnụ ọkụ n'obi.
Nanị mmetụta a na-ahụkarị na Noopept bụ isi ọwụwa nke sitere na ị takingụ nnukwu ọgwụ ma ọ bụ jiri Noopept nootropic ntụ ntụ maka oge mbụ. Uru Noopept bụ na ọ bụ iwu ma na-achịkwa ya naanị na mba ole na ole. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta Noopept, ịkwesịrị ịtụle iwu obodo gị. Site n'ime nke a, ị nwere ike ịmata ma ịchọrọ ọgwụ ọgwụ ma ọ bụ na ịchọghị.
The Usoro ọgwụgwọ Noopeptbụ 30-60 mg kwa ụbọchị.
Ọ bụ ihe na-anabata nke ọma ma na-abịa ntakịrị mmetụta.
Ọ kachasị mma iji choline.
Nootropic kachasị mma maka neuroprotection
8 Pure≥98% Nefiracetam ntụ ntụ 77191-36-7
Mgbe ha rụsịrị ọrịa strok, ọtụtụ ndị ọrịa na-akọ na ha nwere ihe ọdịdọ, nke nwere ike ibute mbibi ụbụrụ yana nchefu echefu. Ọ dabara nke ọma, Nefiracetam egosila na ọ ga-echebe megide ọnya. Ọ na-eme nke a site na ịchịkwa akara NMDA nke na-egbochi imegide ọkwa nke glutamate.
Ọ bụ otu n'ime ndị ọhụrụ so na ndị otu racetam, ụfọdụ n'ime uru ya ndị ọzọ gụnyere mmelite nke ọnọdụ, mmụta na ncheta. Mgbe ị na-atụle nefiracetam VS aniracetam, ọtụtụ nefiracetam nyocha na-akọ na ọ na-ebute mmụba dị ukwuu na ọnọdụ mmadụ.
Mmetụta Nefiracetam dị ole na ole, si otú a na-ewere ya dị ka ihe nchekwa ma nabata ya.
Ọ bụ ọgwụ na-egbu egbu; n'ihi ya, usoro dos dị ala na-adịkarị irè karị ma e jiri ya tụnyere piracetam.
Nefiracetam abanyela n'ọmụmụ anụmanụ yana ụfọdụ ọmụmụ ụmụ mmadụ.
Usoro onunu ogwu bu 100mg-900mg kwa ubochi, ewere ya ugboro abuo; otu n'isi ututu, nke abuo n'isi ututu.
Nkwalite ọgụgụ isi kachasị mma
9 Pure≥98% Aniracetam ntụ ntụ 72432-10-1
Smart ntụ ntụ aniracetam bụ ampakine nootropic nke dị ike karịa piracetam. Ọ na-ewe nrite ahụ mgbe ọ na-abịakwute mmelite nke uche ma rụọ ọrụ site na ịkpali ndị nnabata AMPA; onye nkịtị CNS glutamate na-anabata ya. Ndị nabatara AMPA na-arụ ọrụ dị mkpa na nhazi ncheta na mmụta.
Uru ndị ọzọ nke Aniracetam ntụ ntụ gụnyere mmụba na ntụgharị uche, mbelata nchekasị, na mmụba nke nghọta. Mmetụta dị ole na ole ọ na-akpata ma e jiri ya tụnyere piracetam na-eme ka ọ bụrụ ihe a ma ama ka ọ ghara ịkọwa nsonaazụ ya nke siri ike karịa iko kọfị.
Aniracetam ntụ ntụ na-eme ka ikike ụbụrụ mmadụ dịkwuo elu site na ịba ụba ụbụrụ na-akpata neurotrophic, nke na-eme ka nri ụbụrụ.
O nwere abụba na-egbu oke.
The Aniracetam usoro onunu ogwubụ 1500mg kewara ugboro abụọ n'ụbọchị.
Otu nwere ike na-eche na Aniracetam utịpMgbe nkeji iri na abua gachara tupu i were ya.
Nootropic kachasị mma n'ịgwọ ọrịa Alzheimer
10 Pure≥98% J-147 ntụ ntụ 1146963-51-0
J147 ntụ ntụ bụ nootropic mepụtara na 2011, nke ahụ nwere ike ịgbanwe mbịara ihe n'isi, belata ma ọ bụ gbanwee oria Alzheimer. O sitere na ìgwè phenyl hydroxide a na - esitekwa n'ụdị udiri udiri udiri curcumin.
J147 na-arụ ọrụ site na mbenata ọrụ njikọ ATP na mitochondria. Site na nke a, ọ na-echebe mkpụrụ ndụ neuronal site na ụbụrụ na-emetụta ụbụrụ nke afọ. Nnyocha a bịara dị ka ihe nrịba ama nye ndị nchọpụta ebe ọ bụ na ọtụtụ ọgwụ Alzheimer lekwasịrị anya na ihe ndị amyloid na-edebe na ụbụrụ ndị ọrịa Alzheimer. Alzheimers ọgwụ ọjọọ enyereghị aka mgbe niile.
Enweela ule J147 zuru ebe niile, ọ gosipụtakwa na ọ dị irè ma were ya dị ka onye kwụsiri ike. Site na nsonaazụ ikpe J147 na-ekwe nkwa, o doro anya na J147 nwere ike inye aka n'ịgwọ ọrịa Parkinson na ọrịa strok.
J147 na-enyere aka n'ịgwọ ọrịa nke neurogenerative.
Ọ bụ ọgwụ nnwale nwere ihe mgbochi ịka nká.
J147 na-arụ ọrụ site na ịgbanye protein dị na mitochondria (mkpụrụ ndụ na-enyere aka n'ọgbọ nke ike).
Kasị mma antiotot nootropic
11 Ọcha≥98% Magnesium L-Threonate Powder 778571-57-6
Ọ dịtụla mgbe ị chere na ikike nghọta gị nwere ike ịnọgide na-emebi emebi ọbụna na ịka nká? Magnesium L-Threonate ntụ ntụ bụ nnu pụrụ iche L-threonic acid magnesium nke na-emeju magnesium na ụbụrụ mmadụ, na-eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụ otu n'ime ụdị magnesium kachasị dị na ahịa.
Magnesium L-Threonate ntụ ntụ nootropic na-arụ ọrụ site na ịba ụba njupụta synaptic gburugburu mpaghara hippocampus dị na ụbụrụ. Site na nke a, ọ na - akwalite ncheta ogologo, mkpụmkpụ, na nke na-arụ ọrụ ma ndị na-eto eto ma ndị agadi.
Ọ na - eme ka ọnọdụ magnesium dịkwuo n'ahụ mmadụ yana ikike ọgụgụ isi ha.
Ezigbo magnesium L-Threonate usoro onwa bụ 1500-2000mg
Ọ na - enyere aka icheta ncheta, belata belata n'ihi ịka nká, ma na - enye aka na ịmepụta ụzọ ụzọ ọhụụ.
Magnesium L-Threonate bụ onye mbụ na-eme nchọpụta mere na MIT onye tinyere onye mmeri Nobel.
Nootropic kachasị mma n'ịkwalite ọrụ gbasara obi
12 Pure≥98% Nicotinamide Riboside Chloride ntụ ntụ 23111-00-4
Nicotinamide riboside Chloride ntụ ntụ bụ ihe kachasị mma nicotinamide adenine dinucleotide na ahịa, nke bụ vitamin precursor. Uru dị na ya bụ na ọ na-adị mfe ịgbanwe NAD + otu oge na ahụ ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ NAD + ndị bu ụzọ.
Nicotinamide riboside Chloride bulk ntụ ntụ na-ebelata ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa obi site na ị gbanwee mgbanwe ndị metụtara afọ na akwara gị. Site n'ịwelite ọkwa NAD +, enwere mbelata na ọkpụrụkpụ, nkwesi ike nke na-agbakwunye na mgbakwunye.
Ihe ndị ọzọ Nicotinamide riboside Chloride bara uru gụnyere inye aka na ọnwụ ọnwụ, belata ihe ize ndụ kansa, nyere aka n'ịgwọ jet lag, ma nyere aka n'ịkwalite ịka nká ahụike.
Mmetụta dị n'akụkụ adịghị mkpa, mana ogo ahụ nwere ike ịba ụba site na iji usoro ọgwụgwọ dị elu.
Ọ na-ebulite ọkwa NAD ọbara dị elu ruo oge 2.7.
Ezigbo Nicotinamide riboside Chloride dose bụ 1000-2000mg kwa ụbọchị.
Ọ dị mma na enwere obere Nicotinamide riboside Chloride side effects ka a kọchara.
Nootropic kachasị mma maka ọgwụgwọ ọrịa shuga
13 Pure≥98% Galantamine Hydrobromide ntụ ntụ 69353-21-5
Taa, ọrịa shuga bụ otu n'ime ọnọdụ kacha mma ndị mmadụ na-arịa n'ụwa niile. N'ụzọ dị mwute, ngwongwo a nwere nitrogen egosila iji nyere aka jikwaa ọrịa ahụ. Ọ na-eme nke a site na imeziwanye ụzọ mgbazinye insulin. Galantamine Hydromide na-ebelata oke ibu site na iweda mbufụt, nkwụsi ike insulin, ibu ahụ, na ọkwa cholesterol.
N'oge gara aga, ejirila ya na ọgwụgwọ nke adịghị ike anụ ahụ na nghọta, na nbibi nke moto na-ebute site na nsogbu ụjọ usoro ụjọ.
Ọzọ Galantamine Hydromide ojiji gụnyere boosting nke cognitive ọrụ, belata ogbu na nkwonkwo mgbu, ma melite mgbaàmà na autistic ụmụ na Alzheimer oria.
A na-enweta ya site na ifuru na urukuru nke snow drop Caucasian, Daffodil, lilide udidi uhie, Garanthus woronowii, na snowdrop nke Voronov.
Galantamine Hydromide na-agbaso nke ọma, na-enwe bioav adị nke 90%.
Ọ na - enyere aka n'ịhazi ọrịa nke degenerative dịka Alzheimer site na ịkwalite ebe nchekwa, mmata na ikike ịrụ ọrụ kwa ụbọchị.
Kachasị nootropic n'ịlụ ọgụ ọgụ cancer
14 Pure≥98% Compound 7P ntụ ntụ 1890208-58-8
Ngwakọta 7P ahụ dị ọcha bụ nke na-acha ọcha na nke na-acha ọcha nke e kere na otu usoro nchịkọta nwere nzube iji chọpụta ndị na-eme ihe na-eme ihe na-eme ihe na thromboxane. Ngwunye nootropics 7P ntụ ntụ na-eme ka uto nke ọdịiche-43 ziri ezi na-eduga na mkpalite nke axon regeneration na vivo.
Ngwakọta ahụ 7P egosiputara ọrụ kachasị elu na ịlụ ọgụ etuto ahụ site na imezi microilite n'ụkpụrụ dabere.
Benefitsfọdụ n'ime uru 7P ntụ ntụ gụnyere; mmụba na nhazi, ọgwụgwọ nke ụbụrụ metụtara mmanya, yana mgbochi nke oxidation gburugburu ụbụrụ. Ọ na - enyere aka melite ọnọdụ mmadụ na ịlụ ọgụ ike ọgwụgwụ.
Ọ bụ ntakịrị ntakịrị mmiri na mmiri.
Usoro ntụ ntụ ntụ ntụ nke 7P tụrụ aro kwesịrị ịdị gburugburu 5000mg.
Ọ na-ewe otu awa ma ọ bụ awa abụọ ka ọ gbaa elu.
Onye na - eme ka ihe glutathione kachasị mma
15 Pure≥98% N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester ntụ ntụ 59587-09-6
N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester (NACET) bụ ụdị ester nke N-acetylcysteine ​​(NAC) nke esterification na-enye aka na mmụba nke lipophilicity nke NAC wee meziwanye na pharmacokinetics. Njirimara a na-agbakwunye na ntinye ya dị elu ebe ọ na-adaba n'ime sel ndị na-eduga na mgbanwe ya na cysteine ​​na NAC.
Ọ bụ ihe ntụgharị nke GSH nwere nnukwu bioavailability nke dị elu. NACET na-arụ ọrụ site na dochie NAC dị ka onye na-ahụ maka mucolytic, dị ka ọgwụ antioxidant metụtara GSH, yana ọgwụ mgbochi paracetamol.
Soluble na mmiri na ihe mgbaze mmiri.
Ọ na-abanye n'ime ngwa ngwa n'ime sel gị mgbe nchịkwa gasịrị.
NACETna - enyere aka n'ịhazi ọrịa nke ọrịa degenerative dịka ọrịa Alzheimer.
Ihe ị ga-atụle tupu ịzụta nootropics
Nohọrọ nootropic ziri ezi chọrọ ntakịrị nyocha, mana ọ bara uru ka ọ na enyere gị nsonaazụ ị na-achọ. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ị ga - ebu n’uche mgbe ị na-achọ nootropic;
Anwe ọgwụ nootropic otu ugbo kwa ụbọchị ma chefuo ya bụ ihe ọtụtụ mmadụ ga-ahọrọ ịga. Mana n’echiche n’ezie, ịchọta ezigbo nootropic nke na-arụ ọrụ n’etiti ụdị usoro onunu ogwu a siri ike. Gaanụ maka nke a ga-ewere ya ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro atọ n'ụbọchị ka ahụ gị wee nwee usoro ịchọrọ ọhụụ nke ọma ụbọchị ahụ dum ma e jiri ya na-a oneụ otu ujo.
Chọghị ịzụta nootropics ndị karịrị ego gị. Mana, ị ga-elebara anya na ha niile dị iche na ụzọ ha si arụ ọrụ enweghị atụ maka ya maka ọnụahịa a. Also na-atụghị anya ịzụta ọgwụ ndị dị elu nke nootropics nwere ọgwụ ndị dị mma na ọnụahịa ahụekere. Yabụ tupu ị nọrọ na nke kachasị ọnụ, hụ na lelee ma ọ na-arụ ọrụ dị mma. Ma nke ahụ apụtaghị na ị ga-akwụfe ụgwọ nootropics gị; gaa maka ihe dabara na akpa gị.
Nootropic ọ bụla nwere mmetụta ọ na-akpata. Ọ bụrụ na ịchọrọ nke ga - eme ka mgbakwunye gị dịkwuo elu, enwere otu maka nke ahụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na - achọ ijikwa ọrịa Alzheimer, mgbe ahụ ịkwesịrị ịchọpụta nke kachasị mma maka nke ahụ.
Ọzọkwa, ụfọdụ nwere ike ibute nsonaazụ ndị ọzọ karịa ndị ọzọ. Onweghị onye chọrọ ịrụ ọrụ nke ọma n ’ụlọ akwụkwọ naanị ka ejedebe imeju imeju. E kwuwerị, ahụike gị na-ebute ụzọ, ị gaghị achọ ihe nwere ike imerụ gị ahụ.
Oge ụfọdụ, mmadụ nwere ike ịchọ ijikọ abụọ ma ọ bụ karịa iji nweta nsonaazụ ka mma. , Nwere, ị ga-achọpụta na ọ bụghị nootropics niile dị nchebe mgbe ejiri ha. Dịka amaara ama dị ka ihe eji ama akpa iji bawanye ike ma belata nsonaazụ ụfọdụ, ụfọdụ nwere ike ọ nweghị nchekwa nye gị. Ya mere, ị kwesiri ịma ihe eji eme ihe maka onye ọ bụla na ụzọ ha si emekọrịta tupu ịzụta ha maka ịkwakọ.
Otu ihe ọzọ ị ga - achọ ịchọpụta bụ ọnụọgụ nyocha emere na nootropic. Fọdụ enweghị nkwado nke nyocha ebe ụfọdụ nwere ike ọ gaghị enyocha ụmụ mmadụ. N’oge a, enwere ọtụtụ ọgwụ ọgwụ amamihe dị na ya ndị nyochachara nke ọma.
Yabụ na ọ ga - abụ ihe nchebe nye gị ịhọrọ ngwaahịa nke ejirila gosịsị afọ ojuju ma gosipụta na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma. Site na nke a, a ga-ejide n'aka na obi ruru gị ala, na-ezere imebi ego site n'iwe ihe ndị nwere ike imerụ gị ahụ ma ọ bụ ghara ịrụ ọrụ.
Otutu amuru maka ahia obula banyere ndi ejiri ha n'oge gara aga. Ozi dị otú a kwesịrị inyere gị aka idozi nke kachasị mma ma belata ohere ịzụrụ nootropic nke na-adịghị arụ ọrụ. Gaa maka ndị nwere nyocha kachasị mma na ole na ole na-adịghị mma.
Na mkpokọta, enwere ọtụtụ ihe ịtụle tupu itinye ego gị na nootropic ọ bụla. Iji nweta ihe kachasị mma, ị ga-ekpebi isi ihe niile enyere enyere gị aka idozi nke kachasị ọtụtụ isi ihe ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile.
Uru nke iji nootropics
Kwa ụbọchị, anyị na-achọ ihu; ihe g’esi mee anyi nma karia ndi ozo. Thoughttụleela na mpụga igbe were were na iji nootropics bụ otu n'ime ụzọ nke nwere ike inye ndụ gị ntụgharị.
Ojiji nootropics na-abia n'ọtụtụ uru, ma ọ bụrụ na ịchọpụtaghị nsonaazụ dị mkpa site na iji otu nootropic, ị nwere ike ikpokọta abụọ ma ọ bụ karịa iji hụ nsonaazụ ndị pụrụ iche.
N'okpuru bụ ụfọdụ n'ime uru ndị nootropic;
Mee ka uche gị dịkwuo elu
Chọtala onwe gị ka ị na-eche banyere ihe ọzọ ị chefuru ọrụ dị nso? Ọ bụ ihe dị mma, mana mgbe ụfọdụ ị nwere ike inwe mmetụta dịka ị na - enwe nsogbu ilekwasị anya n'otu ihe n'otu oge, yabụ inwe ọtụtụ ọrụ a na - emezughị emezi na echiche ndị ọzọ. Yabụ kedu ihe ị na-eme?
Iwere ihe nootropics achoputara aka na nke a site n'inyere gị aka itinye uche na oge karịa. Na-esote, ị ga-enye ọrụ niile ọrụ nlebara anya kwesiri ya ọbụlagodi na ọ dị ka ị juputara na uche gị.
Welie ebe nchekwa
Ikekwe, ị gụọla otu isiokwu, ghọtara ya nke ọma mana chefuo ihe niile tupu ụbọchị ule. Nke ahụ ekwesịghị inye gị nsogbu ọzọ; ị noụ nootropics egosiwo na ọ bara uru na ebe nchekwa mmadụ.
Ọ na - eme ka mmadụ cheta ya site na nkwalite na idozi akụkụ ya niile na ebe nchekwa na-echetakwa. Nootropics na-akwadokwa mmepe ụbụrụ ụbụrụ ma kwalite njikọta nke neurons. Site na njikọta dị mma, ịghọta, na icheta ihe ọmụma banyere data na-emewanye ka mma.
Meziwanye ahụike ụbụrụ gị niile
Bụrụ bụ otu n’ime akụkụ ahụ dị mkpa nke ahụ. Nri ọ na-arụ, ka ọ na-emetụta nri na-adịghị mma na nhazi oge niile. Site n'iji nootropics, ị bụghị naanị ịkwalite ebe nchekwa gị, mana ahụike nke ụbụrụ na-akawanye mma.
A na-enweta nke ahụ site na mmụba nke ikuku oxygen na ụbụrụ na mmezi nke neurons na sel ụbụrụ, nke na-eme ka ụbụrụ ahụ rụọ ọrụ nke ọma.
Mee ka obi gị dịrị
Omume ojoo nwere ike imebi ubochi gi ma mee ka i ghara iburu oru gi dika o kwesiri. Ọ dabara nke ọma, enwere ngwaahịa dịnụ nke nwere ike ịkawanye mmụọ gị, na-eme gị obi ụtọ. Nootropics nwere ike ịnapụta nke a na - eme ka ị na - elekwasị anya ma lekwasị anya na ọrụ ị ga - enwe.
Osisi S, Sage JR, Anagnostaras SG (2014). “Psychostimulants na cognition: Pharmacol. Mkpu 66 (1): 193–221.
Frati P, Kyriakou C, Marinelli E, Vergallo GM, Zaami S, Busardò FP (2015). “Smart ọgwụ maka cognitive na nke anụ ahụ nkwalite :. Curr Neuropharmacol. 13 (1): 5–11.
Giurgea, Corneliu, (Jenụwarị, 1977). "Ọgwụ Nootropic". Ọganihu na Neuro-Psychopharmacology. 1: 235–247
1.ghọta ụdị dị iche iche nootropics
Tulee ogwu ogwu 2 kacha nma nootropic na 15
3.Best kachasị mma nootropic ntụ ntụ
4.Best kacha mma maka mmelite nchekwa
5.Best nootropic maka arụmọrụ egwuregwu
6.Best kacha mma maka edemede
7.Best ọgụgụ isi enhancer
8.Best ịenta ntị na-akwalite
9.Best ngwa ngwa na-eme nootropic
10.Best kacha mma maka neuroprotection
11.Best echiche nkwalite
12.The kasị mma nootropic na ọgwụgwọ nke ọrịa Alzheimer
14.Best nootropic na nkwalite nke ọrụ obi
15.Best kacha mma maka ọgwụgwọ ọrịa shuga
16.Ọzọ kachasị mma n'ọgụ cancer cancer
17.Best glutathione nkwalite
18. Ihe ị ga-atụle tupu ịzụta nootropics
19. Uru nke iji nootropics
Zụrụ Fulkazil na ntanetị ekwu, sị:
January 20, 2021 na 10: 19 am
Ike gwụrụ si nootropic tojupụtara URGENT
na-ewere nchịkọta nke 600mg adrafinil, 1500 oxiracetam, 1500 aniracetam (750 ugboro abụọ n'ụbọchị) na ndị ọzọ dị ka d3 na B vitamin kwa ụbọchị Na Alpha gpc maka izu gara aga, na-enwe nkụda mmụọ ma nwee akpa ojii n'okpuru anya m oge niile, kwesịrị onye enweghi obi ike ma chee na nke a ga - enyere m aka ka ike na - agwụkarị m, Stack rụrụ ọrụ ụbọchị ole na ole mana ugbu a ọ na - adị m ka enweghị m ike ijikwa ọrụ ọ bụla na - enweghị nkụda mmụọ na ike gwụrụ, ndụmọdụ ọ bụla?
NKWO ekwu, sị:
January 21, 2021 na 4: 13 am
Nke ahụ bụ nchịkọta siri ike. Gbalịa na-ewere ya ọtụtụ mgbe? Gbalịa na-eji ya ugboro abụọ n’izu, ma jiri ịnyịnya ígwè na stacks ndị ọzọ na-eji usoro ọzọ. Iji maa atụ, a na m anọ n’etiti phenylpiracetam / choline tojupụtara na caffeine / theanine / uridine. Mgbe ụfọdụ m ga-agbakwunye acetyl-l-carnitine na otu n'ime ha.